Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: ဘန်ကောက်တွင် တရားမဝင်မြန်မာအလုပ်သမားတစ်ထောင်လောက် အဖမ်းခံရ
ဘန်ကောက်တွင် တရားမဝင်မြန်မာအလုပ်သမားတစ်ထောင်လောက် အဖမ်းခံရ
ထိုင်းနိုင်ငံထဲသို.တရားမဝင် ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်နေသောနိုင်ငံခြားသားများကို ခရိုင်ရဲများနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိများ ပူးပေါင်းပြီး မနေ.က ဖမ်းဆီးမှုပြုလုပ်ပါသည်။
မြန်မာ၊လာအို၊နှင့် ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံများမှအလုပ်သမား ၉၂၇ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပါသည်။ သူတို.အများစုဟာ တိုင်း၊ စီမုမ်မင် နဲ. စနမ်းဗင်နမ်ဈေးတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြပါသည်။
အလုပ်သမားအများစုသည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ.သစ်သီးဝလံများကို သယ်ဆောင်သောလှည်းများတွန်းခြင်းနဲ.အမှိုက်ပုံအညစ်အကြေးများသန်.ရှင်းပေးခြင်းအလုပ်များကို လုပ်နေကြသည် ဟု အလုပ်သမားရေးရာဌာနမှ အထွေထွေဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဖိုင်ရွတ် သုစမ်းရစ် ကပြောပြသည်။
သူတို.တစ်ဝက်ကျော်ကျော်လောက်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသူများဖြစ်ပါသည်။
ယင် အလုပ်သမားများသည် ထောင် ၅ နှစ်ထက်အောက် နဲ. ဒဏ်ငွေ ၂၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀၀ တစ်သိန်းအထိ ရင်ဆိုင်ရပြီး နေရပ်ဒေသို.ပြန်ပို.ခံရပါသည်။
အလုပ်ရှင်များအနေနဲ. လည်း အလုပ်သမားတစ်ယောက်အတွက် ဒဏ်ငွေ တစ်သောင်းမှ တစ်သိန်းအထိ အရိုက်ခံရပါလိမ်.မည်။
ယင်အလုပ်သမားများကို တရားဝင်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် အလုပ်ရှင်များအနေနဲ.မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးကြပါရန် အလုပ်သမားရေးရာဌာနက သတိပေးလိုက်ပါသည်။
အလုပ်လိုင်စင်အသစ် ပြန်လုပ်ဖို. ဇွန်လ၃၀ ရက်နေ.အထိ လုပ်နိုင်တယ် လို. သိရှိရပါသည်။
Nearly 1,000 alien workers arrested
By Manager Online 28 June 2008 18:38
Bangkok - The provincial police yesterday joined the Department of Employment to arrest alien workers who illegally entered Thailand for work.
927 Burmese, Laotian and Cambodian workers were arrested. They mostly worked at the Tai, Si Moom Muang and Sanambinnam Market.
Pairoj Suksamrit, director-general of the Department of Employment, said most of the alien workers were employed for carrying the vegetables and fruit handcarts, and taking care of the rubbish.
More than half of them illegally came to work in Thailand.
These workers face not more than five years of imprisonment and 2,000-100,000 baht of fine. They will also be repatriated.
The employers will be fined 10,000-100,000 baht per one worker.
The department warned the employers to have their alien workers register so that they could get the licences to work here legally.
Licence renewal can be made until June 30.